Asbuuca Dhireynta Puntland oo laga xusay gobolada kaladuwan ee Puntland…(Sawiro). | Ministry of Environment Wildlife and Tourism
April 17, 2016 at 7:29 am By Abdikani Hayir
Waxaa gobolada kaladuwan ee Puntland si wayn looga xusay asbuuca dhiraynta iyo Ilaalinta deegaanka Puntland kaas oo xaflado iyo barnaamijyo waawayn oo loogu qareemiyo deegaanka lagu qabtay gobolada kaladuwan ee Puntland iyadoona dhir badan loo qaybiyey xarumaha kaladuwan ee dadweynaha, kuwa gaarka ah iyo magaalooyinka si loo cagaariyo deegaanada Puntland.
Xaflada ugu wayn ee dhiraynta ayaa lagu qabtay hoolka xarunta Hay’adda PDRC ee Garowe kaasoo ay kasoo qaybgaleen madaxweyne kuxigeenka dawlada Puntland Eng. Cabdixakiim Xaaji Cumar Camay, Wasiirka Wasaarada deegaanka Dr. Cali Cabdullaahi Warsame, wasiir kuxigeenka wasaarada Faarax Cali Cabdi Agaasimaha guud ee wasaarada Marwo. Muna Daahir Dalmar Iyo madax kale oo aad u badan.
Hobollada Mahuraan Band oo munaasabadda lagu casumey ayaa kusoo bandhigay goobta heeso wacyi-gelin ah oo aad u soo jiitey kasoo qayb galayaashii munaasabadda, heesahaas o ay ku cabbirayeen qiimaha ay leedahay dhirtu.
Wasiir kuxigeenka wasaarada Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska Mudane FaaraX Cali Cabdi oo shirka ka hadlay ayaa uga mahadceliyey dhamaan ka qaybgalayaasha xafladan sida ay usoo ajiibeen waxaana uu sheegey inay Maanta muhiimad gaar ah u leedahay deegaanka.
Agaasimaha Wasarada Deegaanka Marwo. Muna Daahir Dalmar ayaa dhankeeda sheegtay in wasaaradu ay kor u qaadi doonto adeegyada ay bulshada u hayso waxaana ay intaas ku dartay inay ka shaqaynayaan in deegaanada Puntland guud ahaan hoso loo dhimo dhibaatooyinka deegaanka lagu hayo.
Wasiirka Deegaanka dowladda Puntland Mudane Cali Cabdilaahi Warsame ayaa khudbad ka hadlaysa ahmiyadda ay maanta u lee dahay shacabka iyo xukumadda soo jeediyay wuxuuna ka waramay dadaalka kala duwan ee dowladdu ka wado barnaamijkan iyo sidii loo ilaalin lahaa deegaanka waxa kale uu u mahad celiyay saaxiibada barmaanijkan kala shaqeeyay.
Madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ahna ku-simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka sheekeeyey faa’iidada deegaanku u leeyahay noolaha iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in meel looga soo wada jeesto sidii loo ilaalin lahaa deegaankeena.
Sidoo kale Madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ayaa ku boorriyey shacabka Puntland meelkasta oo ay joogaan in ay ka shaqeeyaan ilaalinta deegaanka iyo dhiraynta magaalooyinka iyo tuulooyinka si loo soo celiyo bilicdii magaalooyinka Puntland.
Kusimaha Madaxweynaha ayaa ku macneeyey sababaha keenay roob yaraanta iyo nabaad guurka ku dhacay deegaano badan oo ka tirsan Puntland ay sabab u tahay xaalufinta lagu hayo dhirta, taa beddelkeedana loo baahan yahay in loo midoobo sidii gacan bir ah laysagaga qaban lahaa kooxaha ku haywlan xaalufinta deegaanka.
Ugu dambayntii, Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in dawladda Puntland ay dhowaan samaysay ciidanka ilaalinta deegaanka oo ka hawl gala dhammaan gobollada Puntland, ciidankaas oo amar ku qaba in ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan ciddii lagu arko iyadoo ka shaqaynaysa wax walba oo deegaanka wax u dhimaya.
Wasaarada Deegaanka Puntland iyo hay’adda SWALIM oo kawada hadlay qorshe u samaynta Isticmaalka biyaha iyo Dhulka Puntland.